"Nototoina vodibasy aho raha niaro ity telefaonin-ko ity" - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Malahelo! Izay no tsapa eo amin’ny feon’i Lemainty??? raha nitantara ny nahazo azy izy. "Tsisy mpiaro izahay vahoaka madinika. Na ny zandary noheverina fa mpiaro anay vahoaka aza namono nikasi-tananany zanakay" hoy Rtoa Georgine, renin’i Lemainty. "Nototoina vodibasy aho raha niaro ity telefaonina ity" hoy Lemainty sady nasehony ilay telefaonina no notondroiny ny faritra amin’ny tenany nototoina vodibasy. Ao andamosina izany. Zandary ireo nidaroka azy ireo. "Ity telefaonina ity no nangalako sary ny volinay noratraina" hoy ity raim-pianakaviana ity. Tsy nanaiky aho. Nosintomin’ny zandary ilay finday fa tsy nomeny. Nandohalika i Lemainty ary nataony tao anelanelam-peny ny finday niarovana ny fitaovany. Misy ny horonan-tsary nalainy nandritra ny fandratrana na fanapotehana ny voly. Trakitera roa no hita amin’ny sary nanimba ny voly. Tazana lavitra ny sinoa naniraka ny fanapotehana ny voly.
Sahiran-tsaina i Lemainty. Inona no hatao ? Hitory ? Haka certificat médical ? Ny Fanjakana no fahavalo eto. Aiza no apetraka ny fitoriana ? Eny amin’ny zandary ve ? Zandary ve no hanao ny enquête momba ny zandary namany dia hahazo rariny ny mpitory izay sivily ? Io fitoriana io koa ve no maika sa ny fitoriana noho ny fandratrana ny voly (fandratrana no voambolana fampiasan’ireto mponina any milaza ny fanimbana ny voly) ? Ny andro anefa mivalona sy mitambatra ihany.
Rehefa nojerena ilay voarakitra tao amin’ny finday dia horonantsary (vidéo). Hita fa olon-tsotra tokoa no naka sary fa tsy ireo matihanina. Ny fitaovana rahateo kely sy tsotra. Horonantsary maharitra 5 minitra sy 23 segondra no azony. Izay no niharetany ny fidarohana amin’ny vodibasy. Horonantsary sarotra ampiasaina amina resaka fitoriana ary tsy anan-danja eo anatrehan’ny fitsarana. Tsy hita ny endriky ny sinoa manome baiko. Tsy tazana ao ireo zandary nidaroka.
Tsy sahy nanohitra na nanampy an’i Lemainty ireo tantsaha nanatri-maso. Ny fandratrana ny voly aza tsy sahy nihetsika izy ireo.
Raha ny fitantaran’ny mponina dia tsy vao izao akory ny mpitandro ny filaminana no ampiasa hery hamoretana ny mponina. Efa nisy matetika izany.
Nilaza ihany koa ireo mponina fa mikarama 60 000 ariary isan’andro mandritra ny herinandro ny zandary karamain’ny sinoa miaro azy ireo. Manao andiany tsiroaroa ry zareo amin’izany.
Ny tahaka izao nitranga tao Antsahonjo, fokontany Antanambao, kaominina ambanivohitra Ambodisakoana ary distrika Port-Bergé izao tokoa no manamarina ny anaram-petaka omen’ny olona ny zandary hoe : "Hery famoretana". Fa ny an’i Lemainty amin’izao raharaha izao dia nijanona ho alahelo ary ambarany amintsika mpiray firenena.